အစ္စလာမ် ခေတ်လယ်ကမ္ဘာမှ တီထွင်ဖန်တီးမှုများ စာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
အစ္စလာမ် ခေတ်လယ်ကမ္ဘာမှ တီထွင်ဖန်တီးမှုများ စာရင်း
အစ္စလာမ်ခေတ်လယ်ပိုင်းတွင် တီထွင်ဖန်တီးမှု အများအပြား ပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုကာလအပိုင်းအခြားတွင် အစ္စလာမ် ပထဝီနိုင်ငံရေး အပိုင်းအခြားသည် အနောက်ဘက်တွင် စပိန်နှင့် အာဖရိကသို့တိုင် အရှေ့ဖက်တွင် အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် အိန္ဒိယသို့တိုင် ကျယ်ပြန့်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ စာရင်းသည် (တမန်တော်မိုဟာမက် ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်း) ရှေးဦးသာသနာ့ဦးသျှောင်ကြီးများ ခေတ်မှ စ၍ နောက်ပိုင်း အော့တမန် အင်ပိုင်ယာ၊ စာဖာဗစ် အင်ပါယာ နှင့် မဂို အင်ပါယာ ကာလများအထိဟု ဆိုနိုင်သည့် အစ္စလာမ်ခေတ်လယ်ကာလ အပိုင်းအခြားအတွင်းရှိ တီထွင်ဖန်တီးမှုများ ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ အောက်ပါစာရင်းရှိ တီထွင်ဖန်တီးမှုများအနက်မှ အများစုမှာ အစ္စလာမ့် ရွှေခေတ်ဟု ဆိုနိုင်သည့် ၈ ရာစုမှ ၁၃ ရာစု အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤကာလအတွင်း အနုပညာရှင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ ပညာရှင်များ၊ ကဗျာဆရာများ၊ ဒဿနပညာရှင်များ၊ ပထဝီဝင်အား လေ့လာလိုက်စားသူများ၊ နှင့် ကုန်သည်များသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ အနုပညာ၊ ဘောဂဗေဒ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အစ္စလာမ့်ဥပဒေသ၊ စာပေ၊ ခရီးသွားလမ်းကြောင်းပြ လမ်းညွှန်ဗေဒ၊ ဒဿနိကဗေဒ၊ သိပ္ပံ၊ လူမှုရေး နှင့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တို့တွင် အကျိုးပြုမှုများစွာ ရှိခဲ့ကြသည်။ ဤသို့အကျိုးပြုသည်ဆိုရာတွင် တည်ရှိပီး ဂရက်ကို-ရော်မန် ဒဿနိကဗေဒ၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုများ နှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကို ထိန်းသိမ်းရုံမက ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၏ တီထွင်ဖန်တီးဆန်းသစ်မှုများပါ ပါဝင်လေသည်။
၁ အစားအသောက် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း
တံတားရဟတ်: တံတားရဟတ်ဆိုသည်မှာ တံတားတစ်ခု၏ အပေါ်ပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော ထူးခြားသည့် ရေရဟတ်အမျိုးအစား တစ်ခုဖြစ်သည်။ တံတားရဟတ် အသုံးပြုခဲ့သည့် အစောဆုံး မှတ်တမ်းကို ၁၂ ရာစုအတွင်း စပိန်နိုင်ငံ ကော်ဒိုဗာမြို့၌ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုး လေရဟတ်: အေဒီ ၁ ရာစုတွင် အလက်ဇန်းဒရီးယားမြို့မှ သင်္ချာပညာရှင် အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်သူ ဟီးရိုးမှ လေအားကို အသံးပြု၍ ပုလွေကဲ့သို့ တူရိယာတစ်ခုအား တီးခတ်ပြခဲ့သည်။ ပထမဆုံးသော ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးပေါ်တွင် လည်ပတ်သည့် လေရဟတ်ကိုမူ ပါရှားနိုင်ငံ၊ စစ္စတန်မြို့တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟု မွတ်စလင်ပထဝီပညာရှင်များက ဖော်ပြထားသည်။ ထိုလေရဟတ်များတွင် ရှည်လျားသည့် ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးတန်း ပါရှိပြီး တြိဂံပုံသဏ္ဏန်ရှိသည့် ရဟတ်အသွားများအား တပ်ဆင်ထားသည်။ အစောဆုံးအနေဖြင့် ဒုတိယသာသနာဦးလျှောင် အိုမရ်လက်ထက် (အေဒီ ၆၃၄ − ၆၄၄) ကပင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည် ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ဤသည်မှာ အေဒီ ၁၀ ရာစုတွင်မှ ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟူသော ငြင်းဆိုချက်များလည်း ရှိသည်။ နှီးဖျာချပ် သို့မဟုတ် အဝတ်ပိတ်စဖြင့် ချုပ်သည့် ရွက် ၆ ရွက် ပါဝင်သည့် ဤလေရဟတ်များကို ပြောင်းဖူးများ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ရေငင်ခြင်း၊ ဂျုံကြိတ်ခွဲခြင်း နှင့် ကြံလုပ်ငန်းတို့အတွက် အသုံးပြုကြသည်။ ယနေ့တွေ့မြင်နေရသည့် အလျားလိုက်ဝင်ရိုးဖြင့် လည်ပတ်သည့် ရဟတ်များကိုမူ ဥရောပအနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် ၁၁၈၀ ပြည့်နှစ်ကာလများတွင် တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် အချက်အလက်များ။ အစ္စလာမ် ခေတ်လယ်ကမ္ဘာမှ ဆေးဝါးပညာ
မာကျူရီ ကလိုရိုဒ် (အဆိပ်ရှိသော ပျော်ဝင်လွယ် အဖြူရောင် မာကျူရီ ပုံဆောင်ခဲ): ကို ဒဏ်ရာများအား ပိုးသတ်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဘင်ခရာတပ်: ၁၆ရာစုတွင် ဘင်ရာတပ်ကို ဂျန်နစ္စရီဟုခေါ်တွင်သော အော်တိုမန်တပ်မတော်မှ အထူးတပ်သားတို့ဖြင့် အော့တမန် အင်ပိုင်ယာ မှ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ 
စစ်သုံး လောက်လွဲ: အလ်ဂဒ်ဘန် (ဒေါသအိုး) ဟူသည့်အမည်အား စစ်သုံးလောက်လွဲတခုအား ပေးခဲ့သည်။ ဤအခေါ်အဝေါ်၏ အသုံးမှာ တသမတ်ထဲ မရှိပဲ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် သဘောဆောင်ပုံရ၏။ 
ရှေးဦး ရေအောက်ဒုံးကျည်: ဆီးရီးယားလူမျိုး အလ်ဟဆန် အရ်ရမ္မဟ် ရေးသားသည့် "မြင်းပေါ်မှ စစ်ဆင်ခြင်း နှင့် စစ်အင်ဂျင်များဖြင့် စစ်ဆင်းခြင်း စာအုပ်" တွင် ပထမဆုံးသော ရေအောက်သုံး တော်ပီဒို ဒုံးကျည် ပုံစံ တစ်ခု ပါဝင်သည်။
↑ Bernard Lewis, What Went Wrong:
"There have been many civilizations in human history, almost all of which were local, in the sense that they were defined byaregion and an ethnic group. This applied to all the ancient civilizations of the Middle East—Ancient Egypt, Babylon, Persia; to the great civilizations of Asia—India, China; and to the civilizations of Pre-Columbian America. There are two exceptions: Christianity and Islam. These are two civilizations defined by religion, in which religion is the primary defining force, not, as in India or China,asecondary aspect among others of an essentially regional and ethnically defined civilization. Here, again, another word of explanation is necessary."
↑ Danny Yee။ Islam: The Straight Path, John L. Esposito, Oxford University Press 1998။ Danny Yee's Book Reviews။ 2009-10-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ p. 45, Islamic & European expansion: the forging ofaglobal order, Michael Adas, ed., Temple University Press, 1993, ISBN 1-56639-068-0.
↑ Max Weber & Islam, Toby E. Huff and Wolfgang Schluchter, eds., Transaction Publishers, 1999, ISBN 1-56000-400-2, p. 53
↑ Islamic Golden Age | Islamic History
↑ Lucas, Adam (2006), Wind, Water, Work: Ancient and Medieval Milling Technology, Brill Publishers, pp. 62 & 64, ISBN 90-04-14649-0
↑ ၇.၀ ၇.၁ Drachmann, A.G. (1961), "Heron's Windmill", Centaurus 7: 145–151.
↑ ၈.၀ ၈.၁ Dietrich Lohrmann, "Von der östlichen zur westlichen Windmühle", Archiv für Kulturgeschichte, Vol. 77, Issue 1 (1995), pp.1-30 (10f.)
↑ Dietrich Lohrmann (1995). "Von der östlichen zur westlichen Windmühle", Archiv für Kulturgeschichte 77 (1), p. 1-30 (8).
↑ Maillard, Adam P. Fraise, Peter A. Lambert, Jean-Yves (2007). Principles and Practice of Disinfection, Preservation and Sterilization. Oxford: John Wiley & Sons, 4. ISBN 0470755067။
↑ Bowles, Edmund A. (2006), "The impact of Turkish military bands on European court festivals in the 17th and 18th centuries", Early Music (Oxford University Press) 34 (4): 533–60, doi:10.1093/em/cal103
↑ Chevedden, Paul E. (1 January 2000). "The Invention of the Counterweight Trebuchet: A Study in Cultural Diffusion". Dumbarton Oaks Papers 54: 71. doi:10.2307/1291833. “The traction trebuchet, invented by the Chinese sometime before the fourth century B.C., was partially superseded at the beginning of the eighth century by the hybrid trebuchet. This machine appears to have originated in the realms of Islam under the impetus of the Islamic conquest movements.”
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အစ္စလာမ်_ခေတ်လယ်ကမ္ဘာမှ_တီထွင်ဖန်တီးမှုများ_စာရင်း&oldid=409610" မှ ရယူရန်
July 2011 မှ မပြည့်စုံသေးသည့် စာရင်းများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။